लिखु-४ जलविद्युत आयोजनाको साधारण शेयर ७० प्रतिशत बिक्री, सोमबार सकिँदैछ समयसीमा शनिवार, फाल्गुन १४, २०७८
नवराज केसीको सक्रियतामा नवलपुर-जल्किनी-घोराखोरी सडक निर्माण, राजधानी जाने दूरी छोटियो मंगलवार, फाल्गुन १०, २०७८
लिखु-४ जलविद्युत आयोजनाको साधारण शेयर आजबाट बिक्री खुला, कसरी दिने दरखास्त ? सोमवार, फाल्गुन २, २०७८
जग्गा विवादले लिखु गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण अलपत्र ओखलढुंगा, ३० साउन । जग्गा विवादका कारण जिल्लाको लिखु गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । केन्द्र सरकारबाट डीपीआर भएर बजेट समेत आए पनि भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको हो । शनिवार, श्रावण ३०, २०७८
घोराखोरीमा टेलिकमको ल्याण्डलाइन र इन्टरनेट जडानका लागि हस्ताक्षर संकलन गरिँदै -सुरेश कार्की ओखलढुंगा, २९ साउन । जिल्लाको चम्पादेवी गाउँपालिका ६ स्थित घोराखोरी बजारमा नेपाल टेलिकमको ल्याण्डलाइन टेलिफोन र इन्टरनेट जडाउनका लागि हस्ताक्षर संकलन थालिएको छ । स्थानीय घोराखोरी युवा क्लबले दबाबस्वरुप हस्ताक्षर संकलन अभियान थालेको हो । शुक्रवार, श्रावण २९, २०७८
सोलु करिडोर प्रभावित क्षेत्रका गाउँमा विद्युतीकरण, बिजुली बल्न थाल्यो ओखलढुंगा, २८ साउन । सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा जिल्लामा दीगो विद्युतीकरण गर्ने र यस क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उद्देश्यका साथ निर्माण थालिएको सोलु करिडोर १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजनाले आयोजना प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुर जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरण गरिरहेको छ । ७७ करोड लागतमा थालिएको विद्युतीरण अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बिहिवार, श्रावण २८, २०७८
रिङरोड र सिस्नेखोला पुल उद्घाटन ओखलढुंगा, ४ असार । निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय रिङरोड र सिस्नेखोला पुल उद्घाटन भएको छ । आज प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले दुवै संरचनाको उद्घाटन गरेका हुन् । शुक्रवार, असार ४, २०७८
मानेभञ्ज्याङमा अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने डोजर, टिफर र चालक नियन्त्रणमा ओखलढुंगा, २२ जेठ । जिल्लाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका वडा नं ७ को सुनकोसी नदी र भँडारे खोलाको दोभानमा अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दै गरेको अवस्थामा डोजर, टिफर र चालक नियन्त्रणमा परेका छन् । प्रहरी चौकी हर्कपुरबाट खटिएको टोलीले अवैधरुपमा उत्खनन् गर्ने डोजर, टिफर र चालक नियन्त्रणमा लिएको हो । शनिवार, जेठ २२, २०७८
मन्त्री गुरुङबाट कुन्तादेवीका ५ घर शिलान्यास ओखलढुंगा, २२ जेठ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका १ कुन्तादेवीस्थित डुलडुलेका आगलागीपीडित ५ परिवारका लागि आवास निर्माणको काम थालिएको छ । जनता आवास कार्यक्रममार्फत निर्माण हुने आगलागीपीडितहरुको घर प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले आज शिलान्यास गरेका छन् । शनिवार, जेठ २२, २०७८
पुल ढलानमा माटोसहितको गिट्टी र बालुवा ओखलढुंगा । सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ४ र चिशंखुगढी वडा नं. ८ जोड्ने ठोट्ने खोलाको मोटरेवल पक्की पुलमा गुणस्तरहिन निर्माण सामग्री प्रयोग भएको पाइएको छ । ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता गरेको एक वर्षसम्म काम नै नथालेर पटक पटक ताकेता गरेपछि बल्ल शुरु भएको जग निर्माणमै गुणस्तरहिन सामग्री प्रयोग भएको पाइएको हो । शनिवार, जेठ २२, २०७८
आगामी वर्षबाट दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्ने घोषणा शनिवार, जेठ १५, २०७८
सरकारद्वारा ओखलढुंगा सदरमुकाममा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन शनिवार, जेठ १५, २०७८
ओखलढुंगाको खानीडाँडाको तामाखानी सम्भाव्यता अध्ययन गरेर उत्खनन् गरिने शनिवार, जेठ १५, २०७८
सुनकोशी नदीमा आएको बाढीले भत्कायो नवलपुरघाटको निर्माणाधीन पक्की पुलको स्ल्याब ओखलढुंगा, १३ जेठ । सिन्धुलीको फिक्कल र ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका जोड्ने नवलपुरघाटस्थित सुनकोसी नदीमाथिको निर्माणाधीन पक्की पुलको स्ल्याब बाढीले भत्काइदिएको छ । पुलको ५ वटा स्ल्याबमध्ये तेस्रो स्ल्याब ढलान सकिएकै दिन गएराति बाढीले भत्काइदिएको हो । बिहिवार, जेठ १३, २०७८
लिखु ४ जलविद्युत आयोजनाका कारण रगनी क्षेत्रका मुहान सुके, बोटविरुवा मर्न थाले ओखलढुंगा, ८ जेठ । खिजीदेम्बा गाउँपालिका वडा नं १ मा पर्ने केराबोटे गाउँको ढोरंगे मुहानमा चैत वैशाखमा पनि स्थानीयले पानीघट्टा चलाउँदै आएका थिए । एक धारो पानी स्थानीयले प्रयोग गरेर पनि घट्टा चल्नु भनेको थोरै पानीले सम्भव हुने कुरा भएन । सोही पानीले किसानले सिंचाइ समेत गर्ने गर्थे । तर सो क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको ५२ दशमलब ४ मेगावाट क्षमताको लिखु ४ जलविद्युत आयोजनाका कारण अहिले यो मुहान सुकेको छ । शनिवार, जेठ ८, २०७८